गायक ढकाल दम्पतीको डिभोर्स हुनुको मुख्य कारण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कुख्यात अपराधी पक्राउ गरिदिन चीनको पत्र
वातावरण बने सरकारमा जान्छौं : राजपा →
यसले केही उल्झनमा राखे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको मुद्दा’bout आएको सूचना नै आधिकारीक हो । अदालतले भनेको छ,‘मिलापत्रअनुसार नै डिभोर्स फाइनल गरिएको हो ।’
बुधबार भएका अदालतका कतिपय कामकारबाहीका विषयमा प्रस्टसँग जानकारी गराइएको छ जहाँ यो दम्पतीको डिभोर्स गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।
ढकालले प्रतिरोध गर्नुको कारणचाहिँ सामाजिक रुपमा चर्चा र जवाफ फर्काउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्ने अनुमान सहज छ । तर डिभोर्स किन गरेका रहेछन् त ? मुख्य कारण के होला ?
पत्नी निलमले अदालतमा दिएको निवेदनअनुसार स–साना झगडा र आर्थिक समस्यालाई उल्लेख गरेकी छन् । नेपालमा समस्या भएपछि बेलैमा विदेशमा गएर बसौं, राम्रोसँग जीवन जीउने आधार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव पतिले नमानेपछि झगडा सुरु भएको थियो ।
दिनै झगडा गर्नु भन्दा सहजताका साथ छुट्टिनु नै उपयुक्त विकल्प हुने भएपछि डिभोर्स गर्ने निधोमा पुगेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ती बाँडफाँट नहुने समझादारीका आधारमा भएकी एउटी छोरी आमासँग रहने र छोरीका लागि आवश्यक खर्च र सहयोग बाबु ढकालले गर्नुपर्ने आदेशसहित डिभोर्स भएको विवरणहरूमा उल्लेख छन् ।
१७ बर्षअघि यो जोडीले बिहे गरेको थियो । त्यसबेला गायक ढकाल नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा थिए । आर्थिक मामिलामा पनि अन्य गायक भन्दा उनी निक्कै माथि रहेका थिए । सोही बेला शाहसँग प्रेम सम्बन्ध कायम भएपछि उनीहरू बिहे गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । प्रेम भएको दुई महिनामा नै बिहे भएको थियो ।
गायक ढकालले बिहेलगत्तै निकालेका कतिपय गीत र तिनका म्युजिक भिडियोमा पत्नी शाहलाई मोडलका रुपमा पनि प्रस्तुत गरी चर्चामा पुर्याएका थिए ।(दैनिक )